Ngaba 'Ukukhubazeka' kunye 'neNkcazo yokuHlezeka' yinto efanayo kwiGalofu?
Abadlali beGoli bavame ukuva amagama athi "handicap" kunye ne "handicap index". Amagama amabini aqhelekileyo asetyenziswa ngokuchanekileyo (nakhona apha), kodwa "inkcazo yokukhubazeka" ngokubhekiselele ekufundiseni ngokubhekiselele kwimiba ekhuselekileyo eyenziwe ngokusebenzisa i-USGA (okanye elinye iqumrhu elilawulayo).
Nabani na onokuthi afune "ukukhubazeka". "Yintoni yakho yokukhubazeka?" "Shumi elinane." (Olu hlobo lokusetyenziswa luthetha ukuba amanqaku okugqibela e-golfer ngokuqhelekileyo angama-14 ngemivimbo engaphezu kwe- .) Ukukhubazeka okuzimeleyo kungagcinwa ngabagadi begalufu abangenako, okanye nje bengathandi, bajoyine iqela legalufa kwaye bafumane ukukhubazeka ngokusemthethweni lathisi.
Ukukhubazeka okunjalo okungafanelekanga akunakusetyenziswa kwiintlintiswano ezisemthethweni, nangona kunjalo, kwaye akavunyelwanga ngu-USGA okanye elinye iqumrhu elilawulayo.
Ngoko ukuphula umda ngokugqithiseleyo:
I-Handicap yithuba eliqhelekileyo lemilinganiselo ye-golfer's average score (ngokumalunga ne-14, ngaphezu kwe-14).
Inkcazo ye-Handicap yithuba elikhethekileyo kwinkqubo yokukhubazeka esemthethweni kwaye ibhekisela kwisilinganiselo semidlalo ye-golfer eveliswe njengenxalenye yaloo nkqubo.
System of Handicap System - kunye nokusetyenziswa kwegama elithi "handicap" ngu-USGA - livela ekuqaleni kwe-20 leminyaka. I-USGA yaqala ukusebenzisa "i-index index" ekuqaleni kwee-1980 xa ithe yongezelela ukulinganisa kwe-slope kwi-equation.
Ngoko ke uqobo lwalo: "Inkcazo yokukhubazeka" kukulinganisa ngokusemthethweni kwimeko yokukhubazeka kwe-golfer, kugcinwe kwaye ibalwe yinkqubo esemthethweni yokukhubazeka apho isebenza khona apho i-golfer ihlala khona. (Ngokomzekelo, eUnited States eya kuba yi-USGA Handicap System; e-UK, inkqubo ye-CONGU.) "Ukukhubazeka," nangona kunjalo, ligama eliqhelekileyo lemilinganiselo ye-golfer ye-average score in relation to par.
Inkcazo yokukhubazeka ayiyiyo imbonakalo yamanqaku akho aphakathi (nangona isondele kuyo) kwaye, ukuba uyayenza okulungileyo, akuyiyo into oyisebenzisayo ukuzithemba (okanye udlala). Inkcazo yokukhubazeka yinkalo efaniswa nokulinganisa ikhosi kwaye iguqulelwe ibe yinkinga yokukhubazeka . I-Course handicap isetyenziselwa ukufumana izibetho ezinikeziwe okanye ezifunyenweyo.
I-Wakeboard Towers ephezulu yeBhendi yakho
Indlela i-Climatology eyahlukileyo ngayo kwiMeteorology
Imikhosi yase-Spring Equinox Ehlabathini
Oko Ukwenza Xa Uyakwamkelwa kwiSikolo seGrey